Ukwamkelwa kweKholeji yaseBaldwin-Wallace: UMTHETHO, Imilinganiselo yokwamkeleka
I-Admissions yeekholeji yaseBaldwin-Wallace
UMTHETHO Wama-Scores, izikolo ze-SAT, izinga lokumkela, inkxaso-mali, i-Rate Graduation & More
I-Admissions yeKholeji yaseBaldwin-Wallace:
Ikholeji yaseBaldwin-Wallace uvavanyo-ukhetho; abafundi bangenisa amanqaku avela kwi-ACT okanye i-SAT ukuba bayathanda, kodwa akudingeki ukuba benze njalo. Abafundi mabazithumele izicelo kunye neempendulo zezikolo eziphakamileyo. Ukongezwa okukhethiweyo kubandakanya iileta zinconywa, ukuqhubeka kwakhona kwemisebenzi yexesha elithile, kunye nodliwano-ndlebe kunye nomcebisi we-admissions. UBaldwon-Wallace usebenzisa iSicelo esiQheleleyo.
I-Baldwin-Wallace College Acceptance Rate: 60%
Ikholeji yaseBaldwin-Wallace Inkcazelo:
Ikholeji yaseBaldwin-Wallace yikholeji yobugcisa obuzimeleyo kunye neengqungquthele kwiCawa yaseMethodist. Ikholeji iseBerea, Ohio, malunga nemizuzu engamashumi amabini entshona-ntshona yeCleveland. Ikholeji inqabileyo yembali yayo ebandakanya-ngo-1845, iBaldwin-Wallace uye wavuma ukuba abafundi bangaboni ngohlanga okanye ngesini. Abagqwesileyo kwiBaldwin-Wallace bangakhetha kuma-majors angaphezu kwe-50 kubandakanywa nesithoba kwi-Conservatory yoMculo. Ikholeji inika iinkqubo zokuhlwa kunye neveki zokuqhubeka kwabafundi bezemfundo.
Ubomi bomfundi buhamba kunye neenkampani zabafundi abangaphezu kwe-100 kunye nemibutho kubandakanywa inkqubo yobudlelwane kunye nobutyebi. Kwiimidlalo, i-Jacket yeBaldwin-Wallace iJejethi iyancintisana kwiNkomfa ye-NCAA III III ye-Ohio Athletic. Iikholeji zeekholeji ezilishumi elinamanye amadoda kunye neyeshumi zezemidlalo ezithandanayo.
Ngenxa yamandla onke ekholeji, yenze uludwe lwam lwamakholeji aphezulu e-Ohio .
Ubhaliso lwabonke: 3,933 (3,287 abaphumelele phantsi)
Imfundo kunye neMali: $ 30,776
Iincwadi: $ 1,582 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: $ 8,748
Ezinye iindleko: $ 3,540
Iindleko ezipheleleyo: $ 44,646
Uxhaswa ngezezimali zeBaldwin-Wallace (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 20,102
Imali: $ 7,977
I-Majors Eyaziwayo kakhulu: i- Accounting, i-Biology, uLawulo lwezoRhwebo, iMfundo yabantwana abaselula, isiNgesi, ukuThengisa, iNzululwazi, ubudlelwane boLuntu
Ezemidlalo zaMadoda: Ibhola, iBhola lebhola, Izwe eliphambili, Ibhola, iGalofu, iLacrosse, iChola, UkuBhukuda nokuDaza, I-Tennis, I-Track & Field, Ukulwa
Ezemidlalo zaBasetyhini: Ibhola yeBhola, I-cross Cross, iGolfo, iCrosrosse, iConcer, i-Softball, Ukubhukuda nokuDaza, iThenti, i-Track & Field, i-Volleyball
Baldwin-Wallace kunye nesicelo esiqhelekileyo
Ikholeji yaseBaldwin-Wallace isebenzisa isicelo esiqhelekileyo . La manqaku angakunceda ukukukhokela:
Ukuba uthanda uBaldwin-Wallace, Unako ukungafani nalezi zikolo:
Ezinye iikholeji eziphezulu kakhulu e-Ohio ziquka iKholeji yaseKenyon , iYunivesithi yaseDenison , iKholeji yase-Oberlin , iYunivesithi yase-Ohio kunye neKholeji yaseMarietta . Qiniseka ukuba uqaphele ukuba ezinye zezi zikolo zifuna izikolo ze-SAT okanye ze-ACT, kwaye ezinye ziye zamkelwa ngokukhethekileyo kuneBaldwin-Wallace.
Abafundi abanomdla kwiikholeji eziphakathi kwinqanaba (abafundi abayi-2 000 ukuya ku-5 000) abaneenkqubo ezifanayo ezinamandla ezifanelekileyo kufuneka baqwalasele ezi zikhetho ezikufuphi: iYunivesithi yaseYunivesithi , iYunivesithi yase- Ohio yaseYunivesithi kunye neYunivesithi yaseJohn Carroll .
I-Admission Academy Admissions
I-Fresno Pacific University Admissions
I-Western Western Reserve Admissions yaseYunivesithi
IYunivesithi yaseConnecticut, iStorrs Admissions
IYunivesithi yaseYohnson & Wales University-Denver Admissions
5 Iifrimu Ezinkulu ezijongene neGene Tierney
I-Japan Conception yoBomvu: Ngaba Ubomvu Umbala Wothando?
Ngaba 'i-Espérari' idinga i-Subjunctive?
6 Iimfihlakalo zokuFunda ngokukhawuleza zabafundi abadala